အမေရိကန်အစားအစာ | USAHello | USAHello
သငျသညျကို USA မှအသစ်သို့ဖြစ်လျှင်, သငျသညျအမေရိကန်အစားအသောက်တွေအကြောင်းသင်ယူဖို့လိုပေမည်. သငျသညျဖြစ်ကောင်းအများအပြားရွေးချယ်မှုရှိပါတယ်သတိပြုမိကြပါပြီ! သင်၏သားသမီးရဲ့ကျောင်းမှာအမေရိကန်အစားအသောက်နှင့်အစားအသောက်အကြောင်းကိုအထဲက Find. သင့်အိမ်တိုင်းပြည်ကနေအစားအစာမှအမေရိကန်နိုင်ငံသားမိတ်ဆက်ပေးဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူ. အစားအသောက်တွေအကြောင်းယဉ်ကျေးမှုကွဲပြားခြားနားမှုကိုင်တွယ်ရန်နည်းလမ်းများတွင်ကြည့်ပါ.
ဓာတ်ပုံ: iStock / monkeybusinessimages
USA တွင်စားစရာဘို့ရှိပါတယ်မည်မျှရွေးချယ်မှုတွေ့မြင်ရန်သင့်အားအံ့အားသင့်စေခြင်းငှါ. packages များအမျိုးမျိုးတို့ကိုစားနပ်ရိက္ခာအများအပြားအမှတ်တံဆိပ်ရှိပါတယ်. သစ်သီးများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များသူတို့ကရာသီ၌နေကြသည်မဟုတ်သောအခါ၌ပင်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်. သငျသညျစားသောက်ဆိုင်အများအပြားကွဲပြားခြားနားသောယဉ်ကျေးမှုများအနေဖြင့်စားနပ်ရိက္ခာအစေခံကိုသတိပြုမိပါလိမ့်မယ်. အစာရှောင်ခြင်းအစာကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ရေပန်းစားသည်. လျင်မြန်စွာတစ်ဦးစျေးပေါမုန့်ညက်ရရှိရန်လွယ်ကူသောကြောင့်, ပင်သင့်ကားထဲမှထွက်ရတဲ့မပါဘဲဝယ်ဖို့.
အတော်များများကအမေရိကန်အစားအစာများ, အထူးသဖြင့်အစာရှောင်ခြင်းအစားအစာများ, အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌သကြားသို့မဟုတ်ကြာရှည်မဆံ့ (ဒါကြောင့်ကြာကြာကြာရှည်အောင်အစားအစာထဲမှာထားပါဝင်ပစ္စည်းများ). အတော်များများကအသီးအနှံနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ပိုးသတ်ဆေးဖျန်းကြသည်, ကွာအင်းဆက်ပိုးမွှားစောင့်ရှောက်သောလယ်ယာမြေပေါ်တွင်အသုံးပြုဓာတုပစ္စည်းရာများမှာ. သင်ပထမဦးဆုံးမှာနေမကောင်းခံစားရပေမည်သို့မဟုတ်အလေးချိန်ရဖို့စတင်စေခြင်းငှါဒါကြောင့်သင့်ခန္ဓာကိုယ်အစားအစာများဤအမြိုးအစားဖို့အသုံးပြုမည်မဟုတ်ပါ. unhealthful အစားအစာများကိုစားသုံးအများအပြားအမေရိကန်များအတွက်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်, အဝလွန်နှင့်အတွေ့အကြုံများကနျြးမာရေးကိစ္စရပ်များကိုရသူကို. သငျသညျသစ်ကိုအစားအစာကြိုးစားရန်စိတ်လှုပ်ရှားစေခြင်းငှါပေမဲ့လည်း, သငျသညျတဖြည်းဖြည်းအဲဒီလိုလုပ်ဖို့ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်, သင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုထိန်းညှိကြကုန်အံ့နိုင်ရန်အတွက်.
သငျသညျ healthfully နှင့်ဈေးပေါပေါစားရန်ကြိုးစားနေနေတယ်ဆိုရင်, သင်မကြာခဏစားသောက်ဆိုင်မှာစားခြင်းမှရှောင်ရှားရန်လိုပေမည်. စားသောက်ဆိုင်များတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်အစားအစာလျော့နည်းကျန်းမာဖြစ်လေ့ရှိတယ်နှင့်များစွာသောပိုပြီးကယ်လိုရီပါဝင်ပါတယ်, တစ်အစားအစာရှိပါတယ်ဘယ်လောက်စွမ်းအင်ကိုတိုင်းတာကြောင်းယူနစ်ရာများမှာ. ရေခဲမုန့်, ဥပမာ, အများအပြားကယ်လိုရီရှိတယ်. သစ်သီးများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနည်းပါးလာကယ်လိုရီများ.
တချို့ကအမေရိကန်တွေသင်သည်သင်၏ဇာတိနိုင်ငံတွင်စားအစားအစာကြိုးစားခဲ့ကြမည်မဟုတ်ပါ. ကြီးမားသောမြို့ကြီးတွေမှာ, ထိုအရပ်၌များစွာသောတိုင်းရင်းသားစားသောက်ဆိုင်ဖြစ်ကြပြီးဒါကြောင့်လူနိုင်ငံခြားအစားအစာများကိုပိုမိုအတွေ့အကြုံရှိသည်. သေးငယ်မြို့, ဒီထက်ယဉ်ကျေးမှုမျိုးစုံနှင့်အတူ, ကြုံတွေ့အဖြစ်လူဖြစ်ရမည်မဟုတ်ပါ.
အများစုကအမေရိကန်နိုင်ငံသားချက်ပြုတ်သစ်အမျိုးအစားများကိုကြိုးစားဖွင့်ဖြစ်ကြပြီးအသစ်သောဟင်းလျာများကြိုးစားရန်စပ်စုဖြစ်လိမ့်မည်. အတော်များများကအမေရိကန်တွေ potlucks "တွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်,"လူတိုင်းကိုမျှဝေဖို့တစ်ပန်းကန်ဆောင်တတ်၏ဘယ်မှာလူမှုရေးစုဝေးနေသော. Potlucks ကြီးတွေစုဝေးမှာသို့မဟုတ်ပေါ့ပေါ့ညစာစားပွဲမှာဖြစ်ပျက်. ဤသည်ကိုသင်၏အစာမှအခြားသူများအားမိတ်ဆက်ပေးမယ့်အကောင်းအခွင့်အလမ်းဖြစ်စေခြင်းငှါ, ကျောင်းနှင့်လူမှုရေးအခြေအနေများတွင်နှစ်ဦးစလုံး. သင်တို့သည်လည်းညစာစားဘို့လူမျိုးကိုစိုးဖိတ်ခေါ်နှင့်သင့်ယဉ်ကျေးမှုကနေဟင်းလျာများထမ်းဆောင်နိုင်. အချို့လူများကအသစ်သောအစားအစာကြိုးစားနေဖို့ပွင့်လင်းမကျမည်အကြောင်း, သို့သော်, နှင့်လေးစားရန်အရေးကြီးပါသည်က.
အမေရိကန်ကျောင်းများတွင်ကျောင်းသားများငယ်ရွယ်သားသမီးတို့အဘို့အခြို့သောမူကြိုမှ လွဲ. နံနက်စာမခံမယူကြဘူး. သူတို့ကျောင်းမသွားခင်ကလေးများကိုစား, အချို့ကျောင်းများတွင်ကလေးများကျောင်းကော်ဖီဆိုင်မှာသေးငယ်တဲ့နံနက်စာမဝယ်နိုင်ပေမယ့်.
နေ့လည်စာမှာ, ကလေးတွေဟာသူတို့ရဲ့အစာကိုဝယ်သို့မဟုတ် home ကနေအစားအစာဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်ဖြစ်စေ. သင်၏သားသမီးများအတွက်နေ့လည်စာထုပ်ပိုးသင်၏သားသမီးကျန်းမာအစားအစာရှိသည်သေချာအောင်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်, အများအပြားကျောင်းများကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့အစားအစာများနှင့် sugary အချိုရည်အစေခံကတည်းက. USA တွင်ကလေးများမှာလည်းကျောင်းကရန် "မုန်" ဆောင်ကြဉ်း. ၎င်းတို့သည်အတန်းအကြားအားလပ်ချိန်အတွင်းမှာစားသောအစားအစာ၏သေးငယ်တဲ့ပမာဏများမှာ. ဥပမာအသီးအပွပါဝင်သည်, အခွံမာသီး, granola ဘား, သို့မဟုတ် crackers.
သင့်မိသားစုကငွေအများကြီးရှိသည်မဟုတ်ပါဘူးဆိုရင်, တစ်ခါတစ်ရံကျောင်းအခမဲ့ပေးသွားမှာပါ (သို့မဟုတ်စျေးနှုန်းချိုသာ) အစားအစာများ, နံနက်စာအပါအဝင်, သင့်ကလေးအတွက်. တိုင်းကျောင်းကကွဲပြားခြားနားသည်, ဒါကြောင့်သင့်ကလေး၏ဆရာမပြောပြရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်သို့မဟုတ်ကျောင်းအတွင်းရေးမှူးသင်သည်မည်သည့်မေးခွန်းများ.
ကလေးများကျွမ်းတဝင်မရှိသောအစာစားဘို့အသင့်ကလေးကို၏ပျော်စရာစေခြင်းအလိုငှါဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုရှိပါတယ်. ငယ်ရွယ်သောကလေးများတခါတရံအသစ်သောအရာကြောက်နေကြတယ်နှင့်အခြားသူများဒါကသူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်နည်းမှန်လမ်းမှန်သည်ဟုမထင်. သင်ဤအကြောင်းကိုသင့်ကလေးကိုစကားပြောသင့်တယ်, ဒီဖြစ်ပျက်လျှင်ဒါကြောင့်သူတို့အံ့သြသို့မဟုတ်အလွန်စိတ်ဆိုးမဟုတ်. သင့်ကလေးကိုအစားအစာထဲကကိုဖန်ဆင်းသောအရာကိုရှင်းပြဖို့ရွေးချယ်စေခြင်းငှါ, အချို့သောတိုင်းရင်းသားဟင်းလျာများကို USA ၌စားသောသူတို့အားအလားတူပါဝင်ပစ္စည်းများဆံ့အဖြစ်. အမြိုးသားအစိတ်ဝင်စားနေကြသည်မဟုတ်ခဲ့လျှင်, သင့်ကလေးသည်အခြေအနေကဝေးလမ်းလျှောက်ဖို့ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်. သူတို့ကအပေါင်းအဖော်တဲ့နေရာမှာမတူညီတဲ့အုပ်စုတစ်စုကိုရွေးချယ်ဖို့လိုပေမည်.
ကလေးများအစားအစာသင့်ကလေး၏ရွေးချယ်မှု၏ပျော်စရာအောင်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်လျှင်, သင်သို့မဟုတ်သင့်ကလေးအခြေအနေကအကြောင်းကိုဆရာစကားပြောသင့်တယ်. နောက်ထပ်မဟာဗျူဟာအစားအသောက်ယဉ်ကျေးမှုအကြောင်းသင်ကြားမှုအခွင့်အလမ်းဖြစ်လာနိုင်သည့်အတွက်လှုပ်ရှားမှုစည်းရုံးရေးနှင့် ပတ်သက်. ဆရာစကားပြောပါလိမ့်မယ်. သငျသညျအတနျးအတှကျအစားအစာပိုကြီးတဲ့ငွေပမာဏကိုအောင်နိုင်တယ်လို့, ထိုသို့ဆွေးနွေး shared မည်ဖြစ်ကြောင်း
သငျသညျဘာလို့လဲဆိုတော့သင့်ရဲ့ဘာသာရေးသို့မဟုတ်ယဉ်ကျေးမှု၏အစာစားဘို့တစ်စုံတစ်ဦးရဲ့အိမျကိုဖိတ်ခေါ်လျက်ရှိသည်နှင့်အခြို့သောအစားအစာကိုမစားဘဲနေနိုင်လျှင်, သင်သည်သင်၏နှင့် host အိမ်ရှင်မကိုရှင်းပြသက်သာခံစားရသင့်တယ်. သငျသညျထိုအဖြစ်အပျက်ကိုသွားမှီကဒီလိုလုပ်ဖို့သင့်လျော်သည်. အများစုကအမေရိကန်နိုင်ငံသားအခြားသူများကိုအစားအစာအလွန်လေးစားဖြစ်ကြပြီးတောင်သင့်ရဲ့လူနေမှုပုံစံစတဲ့အကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်သင့်အားမေးခွန်းများမေးစေခြင်းငှါ. သငျသညျအလုံအလောက်စားရခဲ့ကြပြီးနောက်တဖန်အစားအစာချင်ကြပါဘူး အကယ်., ဒါကြောင့်ပြောမယဉျကြေးသောမဟုတ်ပါ, "အဘယ်သူမျှမကျေးဇူးတင်ပါတယ်, ငါအပြည့်အဝဖြစ်ကြောင်းကို,"အိမ်ရှင်ကအကြိမ်ပေါင်းများစွာကမ်းလှမ်းရင်တောင်.
သငျသညျသငျ့အိမျနိုငျငံတှငျအစာစားရန်အသုံးပြုကြသည်တချို့ကအစားအသောက်များဖြစ်စေရရှိနိုင်မဟုတျပါသို့မဟုတ်မညီကြောင်းများမှာ. မညီကြောင်း မသင့်လျော်တစ်ခုသို့မဟုတ်ယဉ်ကျေးမှုအတွင်းတားမြစ်ထားနည်းလမ်းများ. အသားအချို့အမျိုးအစားများ, ထိုကဲ့သို့သောမြင်းအသားများနှင့်တိရစ္ဆာန်များ၏အခြို့သောကိုယ်တွင်းအင်္ဂါအဖြစ်, ရောင်းမစားရကြသည်မဟုတ်. အတော်များများကအမေရိကန်တွေအစာစားခြင်းကလေးသို့မဟုတ်သန္ဓေသားတိရိစ္ဆာန်များမှားယွင်းနေသည်ထင်. အင်းဆက်ပိုးမွှားကိုလည်းရိုးရာအစားအစာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမဟုတ်, သင်မူကားရံဖန်ရံခါအချို့သောတိုင်းရင်းသားစျေးကွက်မှာသူတို့ကိုရှာတှေ့နိုငျ.
အမေရိကမှာ, နို့ထွက်ပစ္စည်းထုတ်ကုန်များ pasteurized နေကြတယ် (အပူ) ဘက်တီးရီးယားသတ်ပစ်ရန်, နှင့်ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဖြတ်သန်းသွားမလတ်ဆတ်သောနို့နှင့်ဒိန်ခဲကိုရောင်းမရနိုငျ. အချို့ကအသီးအပွ, ထိုကဲ့သို့သော mangosteen နှင့် askee အဖြစ်, သူတို့မလုံခြုံဟုယူဆနေကြသည်ဘာလို့လဲဆိုတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ရောင်းချခဲ့ကြသည်မဟုတ်.